Umbala omtsha ohlukileyo weRedmi K20 Pro uza kuthengiswa kungekudala | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Umbala omtsha ohlukileyo weRedmi K20 Pro uza kuthengiswa kungekudala
El Redmi K20 Pro Yeyona nto iphambili kulo mzuzu, kuninzi. Nangona zininzi ezinye iitheminali eziphezulu, ekugwetyweni ngabathile, ukugqitha, ixabiso labo elingenakulinganiswa ngemali alinakuphikiswa. Isixhobo, njengenye yeendawo eziphambili, sixhaswa yi Snapdragon 855 isuka kwiQualcomm, ethi ikunike umbono wokuba inamandla kangakanani, ukuba ubungalazi olu lwazi.
I-terminal ibonakalisiwe, ukusukela oko yasungulwa, njengenye yeendlela ezizezinye Uluhlu oluphezulu kwezinye iifowuni ezinempawu ezifanayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezivela kwi-Samsung, iHuawei kunye nezinye iimveliso eziphambili, kodwa ngexabiso eliphantsi kakhulu kuneli. Kule nto kunye neminye imiba ephambili, enjengoyilo lwayo, ikwenza kakuhle kwimarike. Kungako kunjalo URedmi ngoku unike ingxelo entsha yombala, ezakufika ngeyure nje kwaye siza kubonisa kamva.
I-Redmi K20 Pro-eyaziwa njenge Xiaomi Mi 9T Pro ngaphandle kwe China ne India - uyakufumana umbala omtsha ohlukileyo obizwa ngokuba yiHoney Honey White. Oku kubonakala ngathi kukhuthazwe lukhetho oluze nefayile ye- Xiaomi Mi CC9njengoko igcina uyilo olumhlophe kunye neziphumo ezigqwethekileyo phakathi kwemibala ekhanyayo, kuxhomekeke kwindlela ukukhanya kuboniswe ngayo kwiphaneli yayo yangasemva.
Ukusuka kule-Agasti 1 izayo, ingomso, ungathenga le modeli yeRedmi K20 Pro, kodwa e-China kuphela. Ayaziwa ukuba iya kuthi kamva ifike kwimakethi yaseIndiya nakwamanye amazwe. Okwangoku, ibhengeziwe kuphela ilizwe elinabemi abaninzi emhlabeni kwaye inokubhukishwa apho. Inguqulelo ye-RAM kunye neROM kuphela apho ingafumanekiyo yi-6 GB kunye ne-64 GB, ngokwahlukeneyo, eyeyona ithozamileyo kuzo zonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Umbala omtsha ohlukileyo weRedmi K20 Pro uza kuthengiswa kungekudala
Uyenza njani iakhawunti yakho yeTelegram ukuba izonakalise
I-Realme iyaziqinisekisa kwakhona njenge-XNUMXth ye-Brand enkulu ye-Smartphone yeIndiya